Bitcoin Live Sportsbetting - Zvakawanda Zvokuuya
Pakati penzira dzakawanda dzekuwana hukuru hwe Bitcoin mitambo yokubhejera iri kuburikidza neBitcoin inoratidzira mitambo. Kurarisa kubheta ndeimwe yezvinodiwa kuginganisa zviripo pane Bitcoin sportsbooks nhasi. Inyanzvi inoshandiswa shure shure kurarama kubheti chinhu chinoita kuti chive chisarudzo chepamusoro kune vakawanda vanofarira kutengesa mitambo.
Sezvo zita rinoratidzira, kurarama mitambo yemitambo ndiyo iwe unofunga kuti iri. Izvi zviitiko zvinopfuurira kubva pakutanga kwechiitiko kusvika pakuguma, kupa punters nzira dzakasarudzika dzekuwedzera mamwe anofadza pakubheja zvakaitika.
Kuwedzera kwekutengesa zvingasarudzwa
Chimwe chinhu chinoramba chichijekesa Bitcoin chichirarama nemitambo ndeyekuti iwe unokwanisa kushingaira pamusangano unoramba uripo. Mune nhepfenyuro NFL kana Basketball kubheji, vatambi vanorambidzwa kuisa vatori munguva yehafu yenguva kana kana mutambo uchitanga.
Kuraramisa mitambo, kana "kutamba" kutengesa sekuonekwa kwevamwe, kunosanganisira mikana yakawanda yekutsvaira inogona kukutungamirira kukunda uye kukunda zviri nani. Semuenzaniso, mumwe mukana-kutamba mukana unosanganisira kunakidzwa kusvika pasi mumatambo ekutanga emutambo, uyo unoderedza mutsara uchifarira rimwe boka. Pane dzimwe nguva apo vadikanwi vangaita kuti vaende pasi pegorosi muhupenyu huri kurarama. Zvechokwadi, izvi zvinowanikwa pamutsetse wokutanga mutsara wacho usati watanga.
Mumwewo mukana wekubheja uripo unosanganisira totals inogadzirisa panguva yemutambo nekuda kwekuchengetedzwa kwaro nehomwe. Nokudaro, kana pasina chikwata muzvikamu zvekutanga, ma totals angashanduka kubva pamusana wekuti mutambo unogona kupedzisa nezvikoro zvakaderera.
Uyezve, mapepa emapuraneti aripo kamwechete kwenguva pfupi. Vamwe Bitcoin mitambo yekutengesa mawebhusayithi inogona kuva nayo apo vamwe vasingaiti. Izvi zvinokubvumira kubhadhara pane chimwe chiitiko chichaitika panguva yemutambo. Semuenzaniso, unogona kuita iyo-kutamba bheji kana iwe uchifunga kuti motokari inotungamirira kune kugadzirisa, mutengo, kana chinangwa chebasa.
Kuwedzera mikana yekuwana mikana
Zvose mune zvose, Bitcoin inoratidzira mitambo inozarura chisarudzo chakakura kune avo vanoda kuwedzera chimwe chinhu chakasiyana nemakumbo avo. Kurarisa kubheta kunokubvumira kubheta mushure mokunge uchinge uchinge uchinge uchitarisa panguva yemutambo kana usati waitika chero chimwe chiitiko chinokonzera kuchinja kunoitika Wedzerai kukunda kwekunaka kwako uye kufarira mune zvose zvinofadza zve Bitcoin mitambo yokubheja.